E-4C1 ○ A ga-emegharị akwa ahụ nwayọ mgbe mmiri iyi abụọ a na-emegharị emegharị n'otu ọkwa, enwere ike igbachi ya na akpaghị aka mgbe ọ bụla nwere ike ịdabere na mmiri iyi ọ bụla. Ering Onye na-eme njem na-eme ka onye na-adọ aka na-aga ihu kwụ ọtọ. Made A na-eji HDPE mepụtara otu ihe eji eme ikpo okwu ma a na-eji akụkụ ya. Spring Isi mmiri Gas nke na-achịkwa Backrest. ○ A na-arụ ọrụ mgbatị elu site na crank. Cas Dia.150mm castors na etiti l ...
E-3C1 ○ A na-eji ihe eji eme HDPE etinyere uzo abuo a na uzo abuo. Rest Isi mmiri hydraulic auxilialy na-achịkwa Backrest. Rest Isi mmiri hydraulic auxilialy na-achịkwa Backrest. Cas Ф150mm castors nwere igwe eji egbochi ya. Cas Ф150mm castors nwere igwe eji egbochi ya.
E-8 A1 ○ Ihe eji emeputa ihe ana - esiri mee ihe ngosiputa ihe eji eweli okpomoku jiri okpukpu abuo nke okpukpu abuo ma daa ma nwekwaa ihe nlere. System Igodo mkpọchi na igwe na - eme ka onye na - adọ adọ na - agagharị nwayọ, na ịdabere na. ○ Onye na-ejide ya nwere ọrụ nke hi-low, Trendelenburg ma tụgharịa Trendelenburg nke ndị na-agba ụkwụ na-aga n'akụkụ abụọ nke onye na-ebe ya. Rear Azụ nke eriri aka nwere Central mkpọchi akpọchi, mkpuchi ala ...
E-8 A2-Standard nhazi 1.Ckeral breeki siski: ejiri brake gbara ya n'akụkụ anọ nke ihe ndina na -eme ka brakes nọ n'ọnọdụ kachasị mma ma nwee nkwekọrịta) .Iji ndị na-ebubata ya na njiri mara mma dị elu na-eme ka brak ndị ahụ nwekwuo mgbanwe. Ma ndu-gi ogologo. Nkwado akụrụngwa 2.Multi: Nkwado maka akụrụngwa nwere ike itinye ihe nlele ma nweekwa ike iji ya mee isi dị ka iji gbochie ndaghari nke onye ọrịa. 3.Push Aka: Mbelata ọrụ na preventi…
E-8 A3-Standard nhazi 1. Usoro breeki etiti: Jiri ya na breeki anọ gbara ya gburugburu n'akụkụ ihe ndina na -eme ka brak ndị ahụ n'ọnọdụ ọfụma ọfụma ọfụma. ndu ogologo ndu. Nkwado akụrụngwa 2.Multi: Nkwado maka akụrụngwa nwere ike itinye ihe nlele ma nweekwa ike iji ya mee isi dị ka iji gbochie ndaghari nke onye ọrịa. 3.Push Aka: Mbelata ọrụ na-egbochi ma gbochie…